Graphic Design - Discuss Agency
Branding နှင့် Identity
Branding နဲ့ Identity ဆိုတာဟာ Discuss Agency က လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ Graphic ဒီဇိုင်း၊ Logoဒီဇိုင်း၊ ပန်းဖလတ် ဒီဇိုင်း၊ Business Letterhead ဒီဇိုင်း၊ စာအိတ် ဒီဇိုင်း စတာတွေကို ပြုလုပ်ပေးတဲ့ Service ကိုဆိုလိုပါတယ်။ အဲ့ဒါအပြင် Facebook Cover, Youtue Cover စတာတွေကိုလည်း ရေးဆွဲပေးလျက် ရှိပါတယ်။
​နောက်ထက် အရေးကြီးဆုံးကတော့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Logo ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Logoကောင်းတစ်ခု ဆိုတာ လူကြီးမင်းတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ ပထမဦးဆုံး ပြယုဒ် တစ်ခု ပထမဦးဆုံး ပုံရိပ်ကောင်း တစ်ခု ( First Impression ) ပါပဲ။ အဲ့လိုပဲ အရမ်းလန်းတဲ့ Graphic Design နဲ့ဆွဲထားတဲ့ ပုံစံတွေကလည်း လူတွေကို ယုံကြည်မှုပိုရှိစေပြီး လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ ရောင်းကုန်တွေကို ပိုမို ရောင်းအားသွက်စေပါတယ်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာရှိနေတဲ့ လိုဂိုတွေဟာ ကိုယ့် ကုမ္ပဏီကို မှတ်မိစေတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေ၊ လုပ်ငန်းရဲ့ အနှစ်သာရ ပြည့်ဝမှု ကိုဖော်ပြနေတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေက ပိုမို များပြားပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း ကိုယ့်လိပ်စာကဒ်မှာ ကိုယ့်ပုံကို ထည့်တာက လူကိုလည်း နာမည်နဲ့တွဲပြီးမှတ်မိစေသလိုပဲ ကိုယ့်လုပ်ငန်းနာမည်ကိုလည်း လူပိုသိစေပါတယ်။
Discuss Agency ကတော့ Graphic Designဝန်ဆောင်မှုကို Color Theory မှန်ကန်စွာ အကောင်းမွန်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ စိတ်တိုင်းကျ ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဒီဇိုင်နာများက ဖန်တီးရေးဆွဲပေးလျက် ရှိတာကြောင့် Branding လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် Discuss Agency မှာ အပ်လိုက်ပါတော့ . . .
Social Media အတွက် Graphic Design ဝန်ဆောင်မှု
Pamphlet ဒီဇိုင်း ဝန်ဆောင်မှု
Logo Design ဝန်ဆောင်မှု
letterhead Design ဝန်ဆောင်မှု
စတာတွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိတာကြောင့် Branding အတွက် စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ Discuss Agency ကိုမမေ့ပါနဲ့တော့ . . .
Logo Design ဝန်ဆောင်မှု ရယူထားသူများ
Yangon Khit Thit Media
Myanmar Press Freedom Center
Double Y Online Shopping Mall
Easy Way Door to Door Delivery